George Clooney Na-akawanye Mma ile anya na afọ - Ozi
Ngosipụta Ngosiputa George Clooney Na-akawanye Mma Na-ele Anya na Afọ
Definitive Proof George Clooney Gets Better Looking With Age
N'ime oge ọrụ 32 ya na-agụta ọnụ, George Clooney esiwo na ọbịa na-agụ Eziokwu nke Ndụ ịghọ otu n'ime ndị kasị ibu nkiri nkiri n'ụwa. Chọpụta, ọmarịcha afọ 56 egosila ụfọdụ ihe ịrịba ama nke ịka nká (mana, dị ka, ọ bụghị n'ezie). Site na ọrụ nkwụsị ya dị ka Dr. Doug Ross na B. ya kpam kpam enweghị nkebi ntughari n'ime DILFhood (Amal, ị mmụọ ozi), ebe a, 11 photos na-egosi Hollywood (mbụ) kasị ruo eruo okokporo bụ naanị na-mma na-achọ na afọ.
Ihe NBC / Getty Images
Mgbe O Mere Anyị Ngọzi na Ọnụnọ Ya na ‘Eziokwu nke Ndụ’
Onye ọ bụla na-eme ihe nkiri ga-amalite ebe ọ bụla, Clooney dị afọ 24 nwetara ezigbo uto mbụ ya nke stardom na 1985 mgbe ọ pụtara dị ka George Burnett na NBC's Eziokwu nke Ndụ .
Foto Vinnie Zuffante / Getty
Ma nye anyị ụfọdụ Oké Obi
Clooney n'ezie nakweere ọdịdị ọdịdị ya bụ Remar site na fim 1990 Uhie Red ya na ubu-ya kpọchiri akpọchi na a dum otutu nke obi. Onye ọ bụla ọzọ na-eche uwe elu a na-emeghebeghị bụ n'ihi mbịaghachi?
Mgbe Ọ masịrị Dị ka Dr. Doug Ross na ‘ER’
Na 1994, Clooney rutere ọrụ nke Dr. Doug Ross na ihe nkiri ahụ ike NBC B.. O kpakpando na oge iri na ise niile ma nweta mmata sara mbara maka nkọwapụta nke ụlọ mberede ụmụaka na-ahụ maka ihe mberede na isi ihe gbasara nna. Kpakpando ahụ dakwasịrị aha abụọ Primimes Emmy Award (Onye Pụrụ Iche Onye na-eme ihe nkiri na usoro ihe nkiri na 1995 na 1996) maka arụmọrụ ya wee gosipụta na ọ dị anya Ụchụ sexy ke sikrob.
Ma Bido owgha Mkpuru Osisi Ohia Ya
Site na Talia Balsam ( Alụkwaghịm ) na Lisa Snowdon ( Ihe Nleba Uzo nke Britain ) to Krista Allen ( Baywatch ), Clooney gbakwunyere aha ole na ole na aha ndị enyi ya nwanyị gara aga na mbido afọ 2000 ma nweta ezi aha ya na Hollywood kacha nwee nzere bachelor.
Njikọ: 14 Celebs onye choputara ebe zoro ezo nye isi iyi nke ntorobịa
Mgbe e chiri ya nwoke kacha nwee mmekọahụ, ọ dị ndụ ugboro abụọ
Clooney ka akpọrọ Sexiest Man Dị Ndụ Ndị mmadụ ke 1997 ye 2006, ke ini enye ekedide isua 36 ye 45. Naanị ụmụ nwoke atọ ndị ọzọ ewepụrụ ụdị ihe a: Johnny Depp (2003 na 2009), Richard Gere (1993 na 1999) na Brad Pitt (1995 na 2000). ’Re nọ n’ezigbo ụlọ ọrụ, George.
Ma jiri Ulo-Ocha Siza ọla-edo dozue allzọ nile nke Mmadu
Ka ọ na-erule afọ 2008, Clooney esilarị na mullet ya tụgharịa mkpọchi silky wee gbanwee ka ọ bụrụ nnu nnu na ose dị ọcha. Swoon.
Mgbe Owere Ihe Omume Movember
Anyị ga-ewere Clooney's Dos Equis Kasị Mmasị Nwoke na bewa ajị agba site na 2010 Golden Globes kwa ụbọchị. Nwee ahụike (na akpịrị na-akpọ m nkụ), enyi m.
ụdị ntutu maka ọdịdị ihu oval
Na ada ada n'elu ikiri ụkwụ na ịhụnanya na Amal Alamuddin
Enweghị ikpe megide akụkọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke Clooney, mana onye connoisseur Casamigos tiri ọla edo mgbe ọ zutere Amal Alamuddin site na enyi ya na 2013. Ọ bụ ezie na ọ swụrụ iyi na ọ gaghị alụ di ọzọ mgbe ịgba alụkwaghịm ya na Talia Balsam na 1993, o doro anya na ọ gbanwere obi. Site na nkeji oge anyị zutere, ọ dị anyị ka ọ dị anyị ka anyị na-ezukọ, Ihe ọchị, anyị kwuru otu ihe ahụ! Nope, dị n'isi anyị…
Pierre Teyssot / Getty Images
Mgbe Ọ gbanye mgbanaka na ya kpam kpam Ọ dịghị onye na-ara ahụ maka ya
Na 2014, di na nwunye ahụ mara mma jikọtara eriri na Aman Canal Grande Resort na Venice, Italytali, tupu ha agaa Seychelles maka ezumike ha. Ogwe aka swiiti adịghị anya nke ọma. (Anyị na-ekwu maka gị, George.)
N'ikpeazụ Mgbe Ọ ghọrọ Papa na Twins Ella na Alexander
Ọ dịghị ihe anyị na - emeghachi-ọ dịghị ihe na - eme George Clooney ka ọ nwee mmekọrịta nwoke na nwanyị karịa nna. Ya na Amal ghọrọ nne na nna ka ejima Ella na Alexander na June 6, 2017, na mberede, nwoke ahụ mgbe a na-atụle nnukwu ụlọ Hollywood ghọrọ nna kachasị nchebe n'ụwa.
Njikọ: 10 nke nna-ukwu kacha mma - nwa nwanyị Duos
ntutu daa dandruff home ịgba akwụkwọ
ọgwụgwọ ụlọ maka ntutu na-eto eto
mfe ime ka nri
ji na nke oma
esi belata afọ site na mgbatị
ogige mara mma n'ụwa